Hindiya Oo Dadka Ku soo Rogtay Inay 66 Million Oo Geed Beeraan 12kii Saacadood-ba
Dadka reer Hindiya ayaa qaybo badan oo kamid ahi si mutadawacnimo u bilaabeen inay beeraan dhir aad u tiro badan, kadib markii ay xumaatay xaalada cimilo ee dalkaasi Hindiya.
Waxaanay kooxahaasi mutadawaciinta ahi amar ku bixiyeen in 12 saacadoodba la beero dhir gaadhaysa ilaa 66 million oo geed, kuwaas oo noqon doona qayb kamid ah Kambaynka degaanka ee la filaayo in xuskeeda iyo bilawgeeda la bilaabo bishan .
Dhirbeeristan waxa ka qayb qaatay dad gaadhaaya ilaa 1.5 million oo qof , kuwaas oo qaaday olole xoogan, kuwaas oo siidh lagu shubaayo hareeraha wabiga Narmada River oo kamid ah gobolka Madhya Pradesh.
Heshiiskii magaalada Paris lagu gaadhey waxay dawlada dalkaasi Hindiya balan qaaday inay kordhin doonto kaymaynta , iyada oo kayn ka dhigi doonta 5 million oo Hectares sannadka 2030 ka, si ay ula dagaalanto cimilada sii xumaanaysa.
Sannadkii ina dhaafay Mutadawaciinta lagu magcaabo Uttar Pradesh ayaa qoraal ku sameeyey oo diwaan geliyey in ka badan 50 million oo geed oo la beeray isla maalin keliyaata, waxaana qoraalkaasi qaatay markii dambe koox kale oo ka socotay World Guinness Records ka.
Koox kale oo isla World Guinness recordka ka socotay ayaa iyaduna kor meer ku samaysay mashruucan dambe ee lagu beeraayey dhirta dhan 66 million ee geed, iyada oo noqonaysa Olole dhirayn ah oo la rajaynaayo toddobaadyada soo socda inuu noqdo kii ugu mucjisada badnaa ee dalkaasi laga sameeyo iyo caalamkaba.
Sida lagu daabacay wargeyska Daily Mail oo uu wargeyska Dawan kazoo xigtay qormadan , waxa soo qaban qaabiyey ololahan kooxo mutadawaciin ah oo ka socday dawlad degaanka Madhya Pradesh , iyaga oo doortay ilaa 24 dhinac oo kamid ah wabiga Narmada , laguna beeri doono ilaa 20 nooc oo dhir kala duwan ah.
Badhasaabka gobolkaasi ayaa sheegay in arrintani ay noqon doonto mid taariikhi ah, kuwaas oo ay si mutadawacnimo ah uga qayb qaateen caruurta, dadka waaweyn iyo madaxda degaankaas oo aan u kala hadhin beerista 66.3 million oo geed , waxaanu intaas ku daray Mr Chivraj Singh Chuhan in aanay tani bad baadinayn Madhya Pradesh laakiin ay bad baadin doonto caalamka oo dhan.